Haddii aad raadinayso in xogta laga telefoonka aad Blackberry wareejiyo Samsung, waxaa laga yaabaa in aad ka heli qaabab tiro badan oo aad samaysaan waxa ku. Internet waa chock-buuxa ah Casharrada kala duwan oo ku saabsan sida loo helo xogta aad ka mid yihiin xiriirada, sawiro, fan iyo farriimo ka Blackberry in aad telefoon Samsung. Dhibaatada waxa ay tahay in inta badan siyaabo kuwanu ma jirta.
Iyadoo browsed internet ee habka ugu fiican in xogta laga Blackberry a wareejiyo phone Samsung ah, si ammaan ah waxaan u qaadan karnaa in qaar ka mid ah dhibaatooyinka waxaan la kulmeen markii uu isku dayay in ay u gudbiyaan xogta ka dhigi lahaa dadka ugu dhiibi. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah;
• Casharrada ayaa inta badan ku lugta leh talaabooyinka aad u dad badan oo kasta oo aad u adag tahay in la raaco
• Qaar ka mid ah dajinta lug iyo software rakibidda galay labada telefoonada, a daalin oo aan loo baahnayn shaqo
• Qaar kale waxay ahaayeen kuwo aad u farsamo ka yar casriga ah shaqsi ah ugu xeel dheer si ay si fudud u buuxiso.
Sidee baad xogta ka Blackberry a wareejiyo ah Phone Samsung?
Sidaas ayaa weli su'aasha ugu weyn ee weli, sidee ayaad si ammaan ah xogta ka Blackberry a wareejiyo ah Phone Samsung? First of dhan, waxaan u leeyihiin in ay dib-up files ee telefoonka aad Blackberry si aad u computer. Waxaanu samayn karaa in ka dib tallaabooyinkan fudud.
Tallaabada Koowaad: Download iyo rakibi Wondershare MobileTrans
Tallaabada Labaad: Back-up xogta ku saabsan Blackberry si aad u computer
Ka dib marka aad u ordaan software ah, xiriiriyaan Blackberry in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Waa in la aqoonsado oo la ogaado MobileTrans aad Blackberry. Next, doorto ikhtiyaarka Back-up ee menu guriga oo aad u horseedi doonaa in guddiga Back-up. Calaamadee dhamaan macluumaadka aad rabto in aad dib-up ka dibna riix "Start Copy." Waa in eegto wax sidan oo kale.
Hadda waxaad haysataa nuqul ka mid ah xogta aad on your computer. Hadda waxaad sii wadi kartaa in ay nuqul xog ku saabsan in aad telefoon Samsung. Si taas loo sameeyo, si fudud ku xidhi telefoonka Samsung in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Mar MobileTrans aqoonsan doono iyo in lagu ogaado telefoonka.
Door Soo Celinta in menu guriga inay soo qaadaan guddi soo celin. In dhibic ka hoos menu xulo qaab file aad rabtid inaad isticmaasho oo la helo file dib-up ee xogta Blackberry aad (mid ka mid ah waxaan abuurnay kaliya) ah. Riix Start Copy si ay u gudbiyaan files si aad telefoonka Samsung. Waxaa ekaan karaa.
Waa maxay sababta loo isticmaalo Wondershare MobileTrans
MobileTrans Waa mid ka mid ah software ugu fiican ee suuqa si ay u isticmaalaan in ay xogta ka mid phone wareejiyo kale ama xitaa dib-up files si aad u computer ah. Sababta tani waa sababta ay tahay si degdeg ah oo wax ku ool ah. Kaliya hal click, aad guurtay oo dhan xogta ka telefoonka aad Blackberry in aad telefoon Samsung. Waxa ka muhiimsan, Wondershare MobileTrans waa fududahay in la isticmaalo. Sidii aynu ku soo bandhigay la xogta aad ka Blackberry ah gudbaayo Samsung ah, xitaa haddii, ma aan ogayn waxa ugu horeeya ee ku saabsan software aad, aad si fudud u isticmaali kartaa MobileTrans si ay u gudbiyaan xogta.
Software Tani waxay sidoo kale taageertaa oo dhan ka hawlgala nidaamyada iyo dhammaan taleefanada iyo software wuxuu la iman doonaa fudud ah si ay u isticmaalaan interface. Iyadoo Wondershare, marnaba ma xumaan kara, mana aad la kulmi doonaan mid ka mid ah dhibaatooyinka soo food leh oo dhan Casharrada kale laga heli karaa internetka.
Waa maxay nooca xogta sameeyo aad rabto in aad ku wareejin ka Blackberry in Samsung Phone?
Dad kala duwan oo inta badan rabaan in ay u gudbiyaan noocyada kala duwan ee xogta ka Blackberry ay telefoonka. Marar dhif ah, aan ogaanno in ay jiraan dadka qaar ayaa iibsaday ah Samsung phone cusub iyo doonayso inaad ugu bedesho, waxa uu sidaa darteed doonayaan inay u dhoofiyaan wax walba ka Blackberry cusub ay Samsung. Xaaladdan oo kale, waxa ay doonayaan inay u gudbiyaan wax walba, ka xiriirada, fariimaha, sawiro in ay music. Sida iska cad, haddii aad rabto in lagu wareejiyo dhammaan xogta ku saabsan telefoonka aad Samsung phone cusub, qorshaha heshiiska uu noqon lahaa wax yar ka qayb dheeraad ah iyo duruufaha. Iyadoo Wondershare Si kastaba ha ahaatee, tani ma u baahan tahay in kiiska, waxaad weli u wareejin karaan dhammaan xogta ka Blackberry in aad si fudud u Samsung oo ka mid ah-click.
Inta badan dadka raba in ay sidoo kale lagu wareejiyo dhammaan xiriirada ay ay Samsung Phone ama qayb ka mid ah xiriirada ay. Haddii qof ayaa doonaya in uu si buuxda u dhaqaaqo phone Samsung ah, ay ku wareejin doonaan dhammaan xiriirada ay, laakiin haddii ay raadinayso in ay isticmaalaan labada telefoonada, si ay telefoonka Samsung wareegi karaa qayb ka mid ah xiriirada ay Blackberry.
Messages sida ugu badan uga wareejiyo marka uu qofku ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo phone Samsung ah laakiin ma doonayo in aan iska dhammaan fariimaha ay lahaayeen ay telefoonka Blackberry.
Qofna ma doonayo in ay lumiyaan sawiro ay qaali ah si ay u dhaqaajiyaan laga yaabaa in ay phone Samsung in ay sii ammaan ah. Waxay sidoo kale laga yaabaa photos, haddii ay doonayaan in ay ku isticmaalaan Samsung Phone halkii ay telefoonka Blackberry.
Si loo dhawro music ee ku shubtaan taleefanadooda iyagoo, dadka inta badan u dhaqaaqi doono maktabadaha music si ay ay telefoonka Samsung inaad nabad ah. Sabab kale oo laga yaabaa, maxaa yeelay, aad rabto in aad leedahay laba playlists kala duwan ee laba taleefan oo kala duwan si aad u dooran karaan si ay u gudbiyaan qayb ka mid ah aad Music Library in aad Samsung Phone oo kale ka tago telefoonka aad Blackberry.
Mararka qaarkood dadka doonaya in ay u gudbiyaan codsiyadooda. Tani waa wax yar oo kala ah, laakiin waa xaqiiqo ah oo aan caadi ahayn.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Blackberry in Samsung